केम्यान टापुहरूको यात्रा | यात्रा समाचार
संसारमा धेरै राम्रा टापु र छ क्यारिबियन सागर यसले प्याराडाइसेसको राम्रो मात्रामा केन्द्रित गर्दछ। उदाहरण को लागी, केमैन टापुहरू, जमैका र युकाटन प्रायद्वीपको बीचमा रहेको बेलायती क्षेत्र, जुन एक हुनका लागि परिचित छ कर हेवन जहाँ कम्पनीहरू र करोडपतिहरूले कर चकित गर्छन्।
तर केम्यान टापुहरूमा उनीहरूको छ पर्यटन कोषा, त्यसोभए आज हामी जान्यौं कि तिनीहरू के हुन्, तिनीहरूको परिदृश्य, तिनीहरूको संस्कृति ...
1 केमैन टापुहरू
2 केम्यान टापु पर्यटन
टापुहरू त्यहाँ कुल तीन छन् र ती क्यारिबियन समुद्रीको पश्चिममा, क्युबाको दक्षिणमा र होन्डुरसको पूर्वोत्तरमा छन्। यो बारे मा छ ग्रान्ड केम्यान टापु, केम्यान ब्रैक र सानो केम्यान। राजधानी जर्ज टाउनको शहर हो, ग्रान्ड केम्यान।
यी टापुहरू क्रिस्टोफर कोलम्बसले १ 1503०XNUMX मा आफ्नो अन्तिम यात्रामा पत्ता लगाएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। कोलम्बसले उनीहरूलाई लास टोर्टुगामा बप्तिस्मा दियो, किनकि यि जनावरहरूको ठूलो जनसंख्याको कारण त्यहाँ एलिगेटरहरू पनि थिए र भनिन्छ, यहाँबाट उनीहरूको नाम आज छ। पुरातत्त्वविद्हरूले युरोपियन बस्तीमा बसोबास गर्ने कुनै अवशेष फेला पारेनन्, तर यसलाई इन्कार गर्न सकिन्न।
त्यसपछि ती टापुहरू थिए समुद्री डाकूहरू, व्यापारीहरू र क्रोमवेलको सेनाका रेगिस्तानहरूका गन्तव्यहरू, जो बेला द्वारा इंग्ल्याण्ड शासित थियो। सन्‌ १1670० मा म्याड्रिडको सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि इ England्ल्यान्ड टापुहरू र जमैकासँगै छोडियो। यद्यपि यो समुद्री डाँकुहरूको लागि स्वर्ग थियो। पछि, दास व्यापारले टापुहरूको भाग्यलाई परिवर्तन ग when्यो जब हजारौं अफ्रिकाबाट ल्याइयो।
धेरै समय सम्म केम्यान टापुहरू जमैकाको अधीनमा थिए, १ 1962 XNUMX२ सम्म जब जमैका स्वतन्त्र भए। केही वर्ष पहिले टापुहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो, त्यसैले त्यो पर्यटन आकर्षण थियो। त्यसपछि बैंक, होटल र क्रूज पोर्ट देखा पर्‍यो। ऐतिहासिक रूपमा केम्यान टापुहरू शुल्क मुक्त गन्तव्य भएको छ। त्यहाँ एक असत्य कथा छ जुन एक जहाज दुर्घटनाको बारेमा बताउँछ जुन टापुवासीहरूले उद्धार गरे। दन्त्यकथा भन्छ कि उद्धारमा उनीहरूले अ crown्ग्रेजी मुकुटको एक सदस्यलाई बचाए र यही कारणले कि राजाले कहिले पनि कर नलगाउने वाचा गरे ...
यी टापुहरू पानीमुनि पहाड श्रृंखला, केम्यान रेंज वा केम्यान राइजको चुचुरो हो। तिनीहरू मियामीदेखि करीव kilometers०० किलोमिटर र क्युबाबाट केवल 700 366 किलोमिटर टाढा छन्। ग्रान्ड केम्यान टापु त्रिकोणमा सब भन्दा ठूलो हो। ती तीन टापुहरू कोरलहरूले गठन गरेका थिए जुन हिउँ युगबाट पहाडका चुचुराहरू ढाकेका थिए, क्युबामा सियरा मास्ट्राका अवशेषहरू। यसको मौसम उष्णकटिबंधीय भिजेको र सुख्खा छ.
त्यहाँ मे महिनादेखि अक्टोबर सम्म एक भिजे मौसम छ र नोभेम्बर देखि अप्रिल सम्म एक वर्षा रहित मौसम हो। तापमानमा कुनै ठूलो परिवर्तनहरू छैनन्, तर खतरनाक चक्रवात ती हुन् जुन एट्लान्टिकलाई जुन देखि नोभेम्बर सम्म पार गर्छन्।
केम्यान टापु पर्यटन
यस टापुबाट सुरु गरौं ग्रान्ड केम्यान। सुन्दर सात माइल बीचs गन्तव्यको शीर्ष in मा छ किनकि यसले धेरै होटल र रिसोर्टहरूलाई केन्द्रित गर्दछ। यो एक हो कोरल बीच टापुको पश्चिम तटमा, सुन्दर। यो एक सार्वजनिक समुद्र तट हो जुन खुट्टामा खोजी गर्न सकिन्छ र यसको नामको बावजुद १० किलोमिटर लामो छ। अर्को तटीय गन्तव्य हो उत्तर ध्वनि, stingrays को घर।
जर्ज टाउन यो परम्परागत आर्किटेक्चर, ड्यूटी-फ्री शपहरू, धनीहरूको लागि विशेष ब्रान्ड, तर हस्तकला पसलहरू र स्थानीय उत्पादनहरूका साथ एक रमाईलो शहर हो। पूर्वमा टापु पार गर्दै तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ रानी एलिजाबेथ द्वितीय वानस्पतिक पार्क वा निलो इगुआनासs स्थानीय ईतिहास थाहा पाउन त्यहाँ छ केम्यान टापुहरूको राष्ट्रिय संग्रहालय, रम पोइन्ट र यसको डाइभि poss संभावनाहरू र यसको क्यासोरिना रूखहरू, पेड्रो सेन्ट जेमे कैसलs, टापुहरूमा सब भन्दा पुरानो भवन, वा बोडेन टाउन, पहिलो टापु शहर।
केमन ब्राक उत्तम गन्तव्य हो यदि तपाइँ मन पराउनुहुन्छ प्रकृति र शुल्क मुक्त पसलहरू होईन। यस टापुमा जान पत्थरका गुफाहरू छन्, त्यहाँ सिन्खोलहरू छन् स्नोर्कलिंग र डाइभिiving, एक धँसा जहाज संग पनि, त्यहाँ टापु को हरियो जंगलहरु, विदेशी चराहरु को लागी एक सुन्दर घर, पैदल यात्रा को आनन्द उठाउन मार्गहरु संग पंक्तिबद्ध ... यहाँ तपाईं भव्य Cayman बाट आधा घण्टा मा, हवाई जहाज मा त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ।
यसको भागको लागि सानो केम्यान टाढाको टापु हो, जुन केवल १ kilometers किलोमिटर लामो र एक किलोमिटर र आधा चौडा हो। यो संग एक सुपर शान्त गन्तव्य हो उजाड समुद्र तटहरूs, खजूरका रूखहरू जुन हावासँग चल्दछ, सफा पानी ... तपाईं यो पत्ता लगाउन बाइक वा स्कूटर भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ, को तातो पानीमा पौडिनुहोस् दक्षिण होल ध्वनि लगुन, रिजर्भ भ्रमण गर्नुहोस् प्राकृतिक Booby पोखरीहजारौं चराहरूको साथ, चट्टानको बीचमा टहलनुहोस् वा मा पौडी खेल्नुहोस् खूनी बे वाल मरीन पार्क.
यहाँ एक छ १1500०० मिटर ड्रप त्यसैले यो गोताखोरहरूको लागि चुंबक हो, प्लस समुद्री जीवन शानदार जुन गहिराईमा लुकाउँछ जहाँ किरण, शार्क र कछुवाहरूको अभाव छैन। तपाईं पनि कयाकमा थोरै प्याडल गर्न हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ र पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ ओवेन टापु, अपरिचित केम्यान टापु जस्तो केहि चीज।
कसरी हामी केम्यान टापुहरूको भ्रमण व्यवस्थित गर्न सक्छौं? ठिक छ, १० दिन राम्रो सुरुवात हुन सक्छ यदि तपाईं ग्रान्ड केम्यानमा समय बिताउन र अर्को टापुमा दुई वा तीन दिन प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने। को गन्तव्य को लागी चन्द्रमाउहाँ महान हुनुहुन्छ किनकि त्यहाँ समुद्री किनारमा घोडामा सवार हुनेहरू, निजी भोजनहरू, र सबै होटेलहरूमा स्पा सत्रहरू छन्। बोल्दै होटल, तपाईं विकल्प छनौट गर्न सक्नुहुन्छ सबै - समावेशी र अरूहरूका खाने र पिउने योजनाहरू छन् जुन तपाइँले छुट्टै तिर्नुहुन्छ।
केम्यान टापुहरूको भ्रमण गर्न भिसा प्रक्रिया गर्न आवश्यक छैन। यदि तपाईं मेक्सिको, ब्राजिल वा अर्जेन्टिनाका नागरिक हुनुहुन्छ भने। Y कुनै खोप आवश्यक छैन, अहिलेको लागी। कोविडलाई के हुन्छ हामी पछि हेर्नेछौं। यो सत्य हो कि धेरैजसो पर्यटन संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आउँदछ तर तपाईं क्युबा र होन्डुरसबाट पनि विमानमा आउन सक्नुहुन्छ। एक पटक टापुहरूमा तपाईं सार्वजनिक यातायात, बस, ट्याक्सी, कार भाडाको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। टापुहरू बीच हाँक्न हो हो वा हो तपाईंले विमानबाट यात्रा गर्नुपर्नेछ, केम्यान एयरवेज एक्सप्रेस।
अवश्य पनि, दिमागमा राख्नुहोस् कि यहाँ तपाईं बायाँ लेनमा ड्राइभ गर्नुहोस्, राम्रो अंग्रेजी। केम्यान टापुको मुद्रा के हो? को केम्यानियन डलरयद्यपि अमेरिकी डलर पनि स्वीकार्य छन्। विनिमय दर १ अमेरिकी डलर ०.1० सीआई $ सेन्टको लागि हो। ठिक छ, हामी आशा गर्दछौं कि यस जानकारीले तपाईंलाई केमान टापुको सम्भावित छुट्टी गन्तव्यको रूपमा सोच्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » पर्यटन गन्तव्यहरू » केम्यान टापुहरूको यात्रा